Ny Fiainana (Virtoalin’ny) Toniam-Paritra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2017 18:00 GMT
(Marihina fa tamin'ny 22 Martsa 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Misy voka-dratsiny ny mipetraka eto amin'ny tontolo virtoaly. Niezaka ny hahalala ireo mpiara-miasa amiko vaovao aho, indrindra ireo bilaogera-toniam-paritra hatramin'ny nanombohako tato amin'ny Global Voices .
Misy tantaram-piainana maro miaraka amin'ireo sary mahafinaritra miaraka amin'ny fandraketana feno misy ny asasoratr'izy ireo mipaingotra amin'izany. Misy ny fanazavana mahasoa rehetra, kanefa tsy ampy fifampikasohan'ny olona izany.
Koa satria matetika isika eo akaikin'ny solosaina foana dia misy, mazava ho azy, ny fomba hafa hifandraisana. Azo atao ny fandefasana hafatra mifamaly avy hatrany raha toa ka mitovy ora ifohazana isika. Ny imailaka no manarona ny fampisarahan'ny alina .
Nahita aho avy eo tamin'ny alàlan'ny blaoginy fa nasain'ny bilaogera Kamla Bhatt ho vahinin'ny rakipeo tsy tapaka izay fanaony antsoina hoe The Kamla Bhatt Show ny tonia any Azia atsimo, Neha Viswanathan. Afaka mihaino izany ianao na mitroka ny rakipeo ato.
Tsy ny feon'i Neha (sy ny fihomehezany mahafinaritra) ihany no re tao anatin'izany, fa takatro ihany koa ny asan'ireo toniam-paritra. Naminavina i Kamla fa mamaky bilaogy miisa 200 isan'andro i Neha, kanefa efa mihoatra ny folo avo heny izany. Eny, marina izany, mamaky bilaogy mihoatra ny 2000 izy, ary manantena izy fa hampiakatra ny isa. Niresaka mari-panondroana na ny tsy fisian'izany ao amin'ny tontolon'ny bilaogy any Azia atsimo i Neha sy ny fiantraikan'ny aterineto eo amin'ny mari-panondroana Indiana ao anatiny sy ivelan'ny firenena.
Tsy ny Global Voices Online ihany no resahana ao. Misy ihany koa ny adihevitra momba ny famahanana bilaogy Tsunami, ny fivoaran'ny bilaogy any aoriana ho setrin'ny hamehana sy ny fampiasana fitaovana sosialy antserasera.
Mazava fa nanana fiainam-piarahamonina hatrany i Neha na dia niaiky aza izy fa nandany hatramin'ny 14 ora isan'andro eo anoloan'ny solosainy. Rehefa niantso azy i Kamla dia sehatra fandefasan-kafatra mifamaly miisa enina no nisokatra teo aminy, izay fifanakalozan-kevitra samihafa tsirairay avokoa.
Rakipeo: miresaka amin'i Neha Viswanathan i Kamla Bhatt